Bankiga Horumarinta Afrika oo Tansaaniya siinaya deyn lagu maal-galiyo dhisme waddooyin - Sabahionline.com
Bankiga Horumarinta Afrika oo Tansaaniya siinaya deyn lagu maal-galiyo dhisme waddooyin
Tansaaniya ayaa Arbacadii (23-ka May) Bangiga Horumarinta Afrika (AfDB) la saxiixatay heshiis ammaah ah kaasoo lagu maal-galin doono dhismaha waddoyinka, sidaana waxa qoray wargayska Daily News ee ka soo baxa Tansaaniya.
Dhismaha Dhuumaha gaaska qaada ee Tansaaniya oo dhaqso loo bilaabayo
355 ka bilyan oo shilin ($222-milyan) ee daynta ah waxaa Daaru Salaam ku sixiixay Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Maaliyadda Ramadhani Kijjah iyo Ergayga Joogtada ah ee AfDB Tonia Kandiero. Jidadka cusub ayaa la rajeynayaa in ay dhimi doonaan qiimaha dayactiridda waddooyinka isla markaana ay yarayn doonaan waqtiga safarradu.
“Ammaahda ayaa gacan ka gaysan doonta horumarinta dhaqan-dhaqaale, yareeynta saboolnimada iyo is-dhex-galka gobollada dalka taa oo loo marayo wanaajinta nidaamka gaadiidka isku xira xarumaha ay ka socdaan dhaq-dhaqaaqyada dhaqaale,” ayuu yiri Khijjah.
Mashruuca ayaa guud ahaan ku kici doona 539 bilyan oo shilin ($339 milyan). Dawladda Tansaaniya iyo Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Japan ayaa bixin doona inta hartay lacagta lagu casriyeeynayo kaabayaasha.
Dawladda ayaa indhawaalaba dib-u-habeyn ku sameynaysay waddooyinkeeda si ay u gaarto yoolkeeda ah Himilada 2025-ta.